Haalataalee fuulaa uumuu fi fayyadamuu
LibreOffice teessuma fuulaa, akkasumas qaabachiisa fuulaa , duubbee mudanaalee, irraantoolee, jalaantoolee, fi tarjaalee barruu ifteessuuf fayyadama. Teessuma fuulawwan qeenxee galmee keessaa jiran hunda jijjiiruuf, fuulichaaf haalataa fuulaa mammiloo uumtee fayyadamuu qabda.
Haalata fuulaa haaraa qindeessuu
Haalataalee fuulaa tarreefaman keessatti, wanta irratti cuqaasa mirgaamirga cuqaasi, fi achumaan Haaraa filadhu.
CaancalaQindeessaa irratti, sanduuqaMaqaa keessatti maqaa barreessi.
Dirqalaalee teessuma haalata fuulaatiif qindeessuuf, Cancala qaaqaa keessa jiru fayyadami,sanaan booda TOLEE cuqaasi.
Haalataa fuulaa fayyadamuuf
Fuula akkaataa fuulaa irratti fayyadamuu barbaadde keessatti cuqaasi.
Maqaa tarree keessaa lama cuqaasi.
Haalataa fuulaa fuula haaraatiif fayyadamuuf
Galmee keessatti iddoo fuula haaraa irratti jalqabuu barbaadde cuqaasi.
Fuula Duubee Jijjiiruu
Title is: Haalataalee fuulaa uumuu fi fayyadamuu